Inkombankombane ngebhilidi likaMasipala – Bayede News
Inkombankombane ngebhilidi likaMasipala
IZIKHULU zikaMasipala waseNewcastle ziyawachitha amahlebezi okuthi selifakwe endalini ibhilidi lalo masipala okuyiNewcastle Civic Centre ukwakhiwa kwalo okudle izigidi zabakhokhibentela.
Posted on 18 October 2018 19 October 2018 by Bayede-News
Emuva kokusabalala kwalama hlebezi iBAYEDE ithole nangemithombo yayo lezi zindaba zokudayiswa kweCivic Centre. Leli phephandaba lithole ukuthi kunosomabhizinisi wakhona kule ndawo osezinhlelweni zokulithenga bese kuthi amanye amahhovisi aphinde awaqashisele umasipala. Umthombo waleli phephandaba uthi kuvela lezi zindaba nje uMasipala uphinde ukhokhe irenti ebhilidini elibizwa ngeNedbank elikhona eNewcastle.
Kuthiwa isizathu esenze kwafinyelelwa esinqumweni sokudayiswa kwaleli bhilidi ukuthi uMasipala ucwile ezikweletini. Umthombo uthi lokhu kuwukumoshwa kwemali yabakhokhintela ngoba kukhona athi benza isivumelwano sokuqhubeka nokurentela leli bhilidi , kodwa bebe bazi kahle ukuthi ukulungiswa kweCivic Centre kwabe sekuphelile.
“Kumanje kuthathwa imali irentele ibhilidi iNedbank engasasetshenziswa njengamahhovisi alo Masipala kanti nangesikhathi besaqashe kulona lalidla uMasipala eningi imali,” kusho umthombo.
Omunye ocele ukungadalulwa okhulume naleli phephandaba uthe uma uMasipala ungalidayisa leli bhilidi ungakwazi ukubuyela esimweni obukuso ekuqaleni. Uthi emuva kokuchuma kwalolu daba kube yinkombankombane ezikhulwini zikaMasipala kungekho ovumayo ukuthi unolwazi ngakho futhi kungekho nophikayo.
Uthi izikhulu ezavuselela inkontileka nabanikazi bebhilidi elikhokhelwa mahhala ziyahlomula ngalo.
“Kubona ngisho ingane ekhasela eziko ukuthi bayadla ngokuqashwa kwebhilidi elingasebenzeli muntu.” Engxoxweni neBAYEDE iNhloko yezokuXhumana kuMasipala waseNewcastle uDkt uDumisani Thabethe uthe kungamampunge ukuthi ibhilidi likaMasipala liyadayiswa.
UDkt uThabethe uthe asikho isinqumo esike sathathwa yilo Masipala sokudayisa ibhilidi. Uthe la mampunge asefikile nakubona njengoba udaba selugcwele nasezinkundleni zokuxhumana. Uqhube wathi umuntu owafaka lolu daba ezinkundleni zokuxhumana usethathelwe izinyathelo zomthetho.
“Lo muntu owabhala lamanga usethunyelelwe incwadi yokuthi akhiphe konke akubhalile ezinkundleni zokuxhumana,” kusho uDkt Thabethe.
Ukuchithile ukuthi barentela ibhilidi iNedbank waphinda wagcizelela ukuthi ayikho imali ebekwe eceleni yokurentela leli bhilidi.
“Singakuqinisekisa ukuthi iNewcastle Civic Centre yaxhaswa ngemali mboleko engama-R195million, esayithola ngaphandle futhi esizoyikhokha isikhathi eside. Enye imali yaphuma oxhasweni lwangaphakathi kuMasipala,” kuchaza uDkt uThabethe.
Khonamanjalo usemkhulu umsindo kubasebenzi ngokungalingani kwamaholo kulo masipala. Sekuvumbuke abasebenzi abathi bashiywa ngaphandle ngesikhathi kwenziwa izinhlelo zokulungiswa kwamaholo.
Phakathi kokunye bakhala ngokuthi kwahanjiswa phambili abasebenzi abayitoho babekwa kwesinye isigaba bona basala esigabeni osekuneminyaka bekusho naphezu kokuba kubona kukhona asebeneminyaka engama-30 baqashwa ngokugcwele kulo Masipala. Bathi abasebenzi abasha sebehola ukwedlula laba abadala.
UDkt Thabethe uthe abasebenzi abanezikhalo abathathe udaba lwabo baludlulisele ekomitini elasungulelwa ukubhekana nezikhalo ezifuze lezi.
Posted in Ezomphakathi, Ozul'azayithole